Shufto badeeda oo malaayiin doolar ku siidaayey markab ay haysteen – SBC
Shufto badeeda oo malaayiin doolar ku siidaayey markab ay haysteen
New Delhi- Kooxaha burcad badeeda Soomaalida ayaa sii daayey markab ay afduub u haysteen ka dib markii ay ka qaateen lacag malaayiin doolar gaaraysa oo madaxfurasho ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amaanka baddaha.
Markabka ay siidaayeen burcad badeeda ayaa ka diiwan gashay wadanka Panama waxaa lagu magacaabaa MT Asphalt Venture waxaana uu u gacan galay shuftada 29-kii September sanadkii 2009-kii.
Siideynta markabkan ayaa ku timid bixinta madaxfurasho gaaraysa 3.6 milyan oo doolar waxaase la sheegay in kooxaha burcad badeedu intii aanay siideyn markabka ay kala degeen shaqaalihii u dhashay wadanka Hindiya kuwaasi oo aan la cadeyn tiradooda.
Nin ka mid ah kooxda markabka haysatey ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in sababta ay ula hareen dadka u dhashay wadanka Hindiya ay tahay si Hindiya ay u siidayso ku dhawaad 100 dhalinyaro Soomaali ah oo loo haysto falal burcad badeednimo kuwaasi oo ay ciidamada Hindiya ka qabteen xeebaha Soomaaliya.
“Markabka subaxnimadii Jimcada ayaan siideynay waxaana qaadanay lacag dhan 3.6 milyan oo doolar, laakiin waxaan la degnay shaqaalaha Hindida, waayo xiligan dawlada Hindiya waxay naga haysataa rag, waxaana ka doonaynaa dawlada Hindiya inay siidayso saaxiibadeen si aynu taasi badalkeeda u siidayno muwaadiniinteeda” ayuu yiri nin magaciisa ku soo koobay Axmed oo u hadley burcad badeeda.
Markabkan ay siidaayeen shufto badeeda ayaa waxaa maamusha shirkad fadhigeedu yahay wadanka Hindiya gaar ahaan magaalada Mumbai oo lagu magacaabo Omci Ship management Pvt taasi oo ay iska leedahay shirkada maalgalinta sameysa ee Bitumen Invest AS oo laga leeyahay dalka Imaaradka Carabta.
Markabkan ayaa xiligii ay qabsaneen shufto badeedu wuxuu ka ambabaxay dekada magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxaana uu ku sii jeeday magaalada Durban ee wadanka Koonfurta Afrika, waxaana saarnaa 15 dhaqaale ah oo dhamaantood u dhashay wadanka Hindiya kuwaasi oo haatan gacanta ugu jira Jiri badeeda.
SBC News Monitoring + Wakaaladaha wararka